‘अल्लाह’ खुसी पार्न भन्दै ६ वर्षीय छोराको बली ! - दर्पण संसार
‘अल्लाह’ खुसी पार्न भन्दै ६ वर्षीय छोराको बली !
२०७७ माघ २६, सोमबार १५:३७ बजे
काठमाडौं । भारतको केरलस्थित पलक्कडमा एक महिलाले देवता खुसी पार्नका लागि आफ्नो ६ वर्षीय छोराको बली चढाएकी छन् ।
३० वर्षीया महिला शिक्षकले अल्लाह खुसी पार्न छोराको कुर्बानी दिएकी हुन् । गर्भवती समेत रहेकी महिलाले घाँटी थिचेर छोराको हत्या गरेपछि आफैँले प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् ।
शाहिदा नाम गरेकी महिलाले आइतबार ३ देखि ४ बजेको समयमा पलक्कडको इमरजेन्सी नम्बर ११२ मा फोन गर्दै प्रहरीलाई घटनाको बारेमा जानकारी दिएकी थिइन् । प्रहरीले महिलाको घरको बाथरुमबाट रगत लतपतिएको शव बरामद गरेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार शाहिदाकी पति सुलेमान र अन्य दुई बच्चाहरू बेडरुममा सुतिरहेका थिए । तेस्रो एवं सबैभन्दा कान्छो छोरो महिलासँग सुतेको थियो । शाहिदाले छोरालाई उठाएर बाथरुममा लगि बाँघेर काटेकी थिइन् । सुलेमान पलक्कडमा अटो रिक्सा चलाउँछन् ।
शाहिदाले अल्लाहालाई खुसी पार्नका लागि छोराको हत्या गरेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ । केही छिमेकीका अनुसार छोराको हत्या गर्ने योजना अघिल्लो दिन नै बनेको थियो । उनले अघिल्लो दिन नै प्रहरीको नम्बर मागेकी थिइन् ।